कोरोनाको संक्रमण दर मात्र होइन, मृत्यु दर पनि उच्च छ यसपटक :: NepalPlus
कोरोनाको संक्रमण दर मात्र होइन, मृत्यु दर पनि उच्च छ यसपटक
डा. नितेश कनोडिया२०७८ वैशाख १५ गते १३:४०
गत साल पनि कोरोना संक्रमणको झिल्को नेपालगंजबाटै शुरु भएको थियो । यसपटक पनि नेपालगंजनै पहिलो शिकार भयो । नेपाल भारत सिमाना मध्ये नेपालगंज पश्चिम नेपालको असाध्यै व्यस्त नाका हो । अन्य क्षेत्रबाट भन्दा नेपालगंजबाट भारत आवतजावत गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । जब भारतमा संक्रमण बढ्दै जान्छ, नेपालीहरु सुरक्षाको निम्ति आफ्नो थातथलो खोज्दै आइपुग्छन् । यो स्वाभाविक प्रकृया पनि हो ।
पोहोर समाजमा कोरोनाको आतंक थियो । मानिसहरु के हो ? कसो हो ? भन्ने भयग्रस्त अवस्थामा थिए । केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय र आम मानिसहरु तयारी अवस्थामा थिए । यसपटक एकैचोटी भारतमा फैलिंदा नेपाल पनि पस्यो । मानिसहरु एक किसिमबाट कोरोनालाई सामान्य मान्न थालिसकेका थिए । ठूला ठूला राजनीतिक जुलुसहरु भैरहेका थिए । धार्मिक कार्यक्रमहरु चलिरहेका थिए । मास्क लगाउन बिर्सिसकेका थिए । सबैलाई नेपालीहरुले कोरोना यसैगरी पचाइदिनसक्छन् भन्ने भ्रम परेको थियो ।
यसपटक त्यसो भएन । तिब्र रुपमा फैलिने कोरोनाले नेपालगंज र आसपासका गाउँ गाउँमा मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । संक्रमण दर मात्र होइन, मृत्यु दर पनि उच्च छ यसपटक । घरका पुरै परिवार नै ज्वरोले थलिएका फोनहरु हामीलाई आइरहेकाछन् । हाम्रो मेडिकल टिम स्थानीय निकाय, नेपालगंजको सरकारी अस्पताल, अरु सबै स्वास्थ्य संघसँस्थासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । पोहोर नाकाबाट छिर्नेहरुलाई सम्बन्धित गाउँपालिका या जिल्लाको समन्वय समितिले बसमा हालेर लैजान्थ्यो । क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरिएको थियो । अहिले बोर्डरबाट छिरेका मानिसहरु खुलेआम हिंडे । सार्वजानिक यातायात प्रयोग गरेर जिल्ला जिल्लामा छरिए । यसरी संक्रमण फैलियो ।
हो, मानिसहरुमा कोरोना संक्रमणका लक्षणहरुको बारेमा धेरै चेतना छ । घाँटी सुख्खा भएर दुख्यो, ज्वरो आयो, सास फेर्न अप्ठेरो भयो, स्वाद हरायो, पखाला लागिरह्यो भने कोरोना हुनसक्दछ भन्ने अनुमान मानिसहरुलाई भएको छ । घरघरमै अक्सिजनको लेभल हेर्न पनि मानिसहरुले थालिसके । तर समुदायमा फैलिन नदिन च्यानल समातेर त्यो च्यानल ब्रेक गर्ने काम भएन । बेलैमा कोरोना हो कि होइन भनेर मानिसहरु जँचाउन आएका पनि छैनन् । घरमै उपचार गर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्रै आइपुग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसले गर्दा मेडिकल टिमलाई धेरै प्रेसर भइरहेको छ ।
हामीहरुले २५० को स्पेशल कोभिड बेड तयार गर्दैछौं । पर्सिसम्ममा तयार हुन्छ । फेरि कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्दा नियमित दुर्घटना हुने र अरु बिरामीहरुलाई पनि उपचार गर्नैपर्यो । त्यसको निम्ति पनि तयारी छ । हिजो मात्रै मन्त्रालयबाट जिम्मेवार व्यक्तिहरुले हामीसँग राय माग्नु भएको थियो । नेपालगंजको सरकारी अस्पताल, हाम्रो मेडिकल कलेज र अरु प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई असाध्यै प्रेसर परेको छ । अस्पतालहरु भरिएका छन् । सबै बेडहरुमा अक्सिजनको सुविधा पुर्याउनेगरी तयारी भएको थिएन । एकैपटक चाप बढ्दा समस्या भएको छ ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको एक विरामी कक्षा
अहिले राज्यले सबै मेडिकल संघसंस्थाहरुलाई समान व्यवहार गरेर फिल्डमा उतार्न सक्यो भने केही हप्तामै स्थितिलाई काबु बाहिर जान नदिने गरी काम गर्नसक्ने विश्वास राख्दछौं हामी मेडिकल व्यक्तिहरु । त्यसको निम्ति नाकाबाट आउनेहरुको कम्तिमा व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । उनीहरुको राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्दछ । त्यसका निम्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । केही दिन सुरक्षित स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाउन सकियो भने समुदायमा फैलिन पाउँदैन । एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्कमा आउन नदिन लकडाउन बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन । लकडाउनका बेला काम गरेर गुजारा चलाउनेहरुको हकमा स्थानीइ, प्रदेश र केन्द्र सरकारले उचित बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । हामी गर्नेबेला यही हो भनेर खटेका छौं । अन्तिम सास रहेसम्म हामी मैदानमै हुन्छौं । यो हाम्रो व्यवसायिक धर्म नै हो ।
राज्यको निजी मेडिकल कलेजहरुलाई हेर्ने नजरिया फरक छ । नीतिगत कुराहरु, जनताको सोंचाइ जे जस्तो भएपनि अहिले पहिलो काम भनेको मान्छेको ज्यान बँचाउनु हो । सरकारी होस् या निजी, सबै स्वास्थ्यकर्मीको पहिलो प्राथमिकता भनेको बिरामी हुन् । राज्यले सरकारी तहमा काम गर्नेहरुलाई जसरी बजेट दिएर सहयोग गरेको छ, निजी क्षेत्रबाट कोभिडको युद्धमा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्दछ । सरसामानहरु खरिदमा सहयोग पुर्याउनुपर्दछ । जिल्ला जिल्लामा मात्र होइन, केन्द्रमा समेत निजी र सरकारीको समन्वय गरी जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुने गरी टिमवर्क गर्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नबढाइकन काम गर्न सकिन्न । अहिले असाध्यै छिटो न्यूमोनिया फैलिएर बिरामीहरुलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । भारतको समाचार हेरेकै छौं । विगतमा जे भयो भयो, अब भोलिको निम्ति कोरोनाको महामारीलाई काबुमा राख्ने गरी सबै मिलेर काम गर्नुपर्दछ । बोर्डरमा कडाइ नहुँदासम्म हामी स्वास्थ्यकर्मी मात्रै खटेर केही हुन्न । हाम्रो अस्पताल पनि भरिभराउ भैसकेको छ । बोर्डर बन्द गर्ने भनेको होइन, बोर्डरबाट आउनेहरुलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यले नै गर्नुपर्दछ ।
हामी पनि राज्यकै हिस्सा हौं । प्रादेशिक सरकारले केही रकम छुट्याएको सुन्यौं । अब पर्खेर हेर्नेबेला छैन । जनस्तरबाट होइन राज्यस्तरबाट सम्पूर्ण तयारी गर्न ढिला भैसकेको छ । ढिलो भइसक्यो । अझ ढिला भए धेरै क्षति हुने खतरा मुखैमा आइरहेको छ । यसो भन्दैमा आत्तिएर समस्याको समाधान हुँदैन । हामी मैदानमा भएकालाई राज्यले सशक्त रुपमा खटायो भने कोराना काबुमा आउनसक्दछ । नलागेकाले लापरवाही नगरौं । अरु सबै काम छोडेर सामूहिक पहल भयो भने हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दछौं भन्ने आत्मविश्वास छ ।
(डा. कनौडिया नेपालगंज मेडिकल कलेजका निर्देशक हुन् । यो आलेख नेपालप्लससितको कुराकानीमा आधारित छ)